Ny kaody macOS dia misy fanazavana momba ilay tontonana OLED voalaza ao amin'ny MacBook Pro | Avy amin'ny mac aho
Ny kaody macOS dia misy fanazavana momba ilay tontonana OLED voalaza ao amin'ny MacBook Pros manaraka
Isika izay manantena vaovao amin'ny resaka fitaovana ao amin'ny Keynote ny alatsinainy lasa teo dia mbola manana ny faniriana isika ary ny Apple dia nifantoka tamin'izay tena zava-dehibe, ireo mpamorona ary kinova ho avy amin'ny rafitr'izy ireo izay havoaka amin'ny fararano ho an'ny olombelona mety maty rehetra.
Ao amin'ny Keynote, nampahafantarina ireo mpandrindra rehetra nanatrika fa ny betas an'ireo rafitra natolotra dia ho azon'izy ireo an'io andro io ihany. Tsy mahagaga raha tamin'io alina io ihany dia mpandraharaha OS X an'arivony no nisintona ilay macOS Sierra vaovao hanomboka hitady famantarana zavatra fa ireo an'i Cupertino dia tsy nilaza izany.
Mazava fa tao anatin'ny Keynote roa ora mampiseho ny vaovao ho an'ny rafitra fiasa efatra, macOS, iOS, watchOS ary tvOS Tsy afaka naseho ny zava-baovao rehetra ananan'ireo rafitra ireo. Apple dia manao famintinana kely momba izay ho avy ary manao fihetsiketsehana sasany hiteraka fientanam-po amin'ireo mpanaraka an-tapitrisany.
Tsy ela dia nanomboka namoaka antsipirihany hita ao amin'ny kaody macOS Sierra. Amin'ity tranga ity dia afaka mampahafantatra anao izahay fa nisy indikasi hita fa ny tsaho miantoka fa ny MacBook Pro vaovao izay nantenainay tamin'ny Alatsinainy dia hanana efijery OLED izay hiseho ny lakilen'ny fiasa ary iza no mahalala ny zavatra hafa.
Ho fanampin'izay, nisy ihany koa ny fiovana miafina amin'ny kaody loharano an'ny macOS izay manambara fa misy koa ny asa amin'ny fampiharana ny TouchID. Ny bara fiasa voalaza miaraka amin'ny efijery OLED dia hanana fandidiana mavitrika, izany hoe Hamboarina araka ny atin'ny fampiharana izay nosokafantsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » MacBook Pro » Ny kaody macOS dia misy fanazavana momba ilay tontonana OLED voalaza ao amin'ny MacBook Pros manaraka
CARLOS SANTANA LOBO dia hoy izy:
Tsy misy teny momba ny fotoana hivoahan'ny Mac Book Pro vaovao.
Azoko antoka fa hilaza zavatra izy ireo izao.
Valio amin'i CARLOS SANTANA LOBO
Salama Carlos, tsy misy zavatra fantatra mazava momba ny mety ho fanombohana na fampisehoana. Tonga ny fotoana hiandrasana sy hahafantarana ireo tsaho miseho.